Iko Kutsvaga kwezwi pane iyo Cusp Yekushandura Commerce? | Martech Zone
The Amazon Ratidza inogona kunge iri yekutenga kwakanyanya kwandakaita mumwedzi gumi nembiri yadarika. Ndakatenga imwe kunaAmai vangu, vanogara kure uye vanowanzo kuve nenyaya nekubatana kwenhare. Iye zvino, anogona kungoudza Show kuti andidane uye tiri kuita vhidhiyo kufona mukati memasekondi. Amai vangu vaiida zvakanyanya zvekuti vakatengera imwe vazukuru vavo kuti vagone kugara vachikurukura navo. Ini ndinokwanisawo donhedza mukati ndokuti kwazisai imbwa yangu, Gambino, pandinenge ndisipo kwechinguva. Anondiona, achihukura, uye kazhinji anotarisa kuseri kwechigadzirwa kuti aone kuti ini ndinokwana sei imomo.
Apple Homepod Ingoenderera mberi nekutengesa seyekutanga sarudzo ine yakangwara mutauri uye yakasimba iOS kusangana. Uye Imba yeGoogle ndiyo mhinduro inodhura ine Android kusangana. Makwikwi ese anoshamisa. Ndichiri Apple fanboy, ndinotya kuti Apple tsika yekudzora inogona kuvarasira ivo kurwa kwenzwi kwenguva refu. Amazon ine yakasarudzika yakavhurika dhizaini uye gumi e zviuru zveunyanzvi yatovepo yekudyidzana nechero basa kana chishandiso.
Pane parutivi noti
Kana iwe uri paSiri uye unonyorera kune yedu podcast, unogona kukumbira Siri kuti Tamba iyo Martech Kubvunzurudza Podcast!
Kana iwe uri paGoogle Imba, unogona kuti Tamba ichangoburwa Martech Kubvunzurudza Podcast!
ZveAmazon, wedzera iyo CheroPod hunyanzvi uye bvunza, Alexa, Alexa, bvunza AnyPod kunyorera kuMartech Kubvunzana.
Kudzokera pakutenga maitiro… Capgemini surveyed vanopfuura zviuru zvishanu vatengi muUS, UK, France neGerman kuti vazive kuti vari kudyidzana sei nezwi michina - kunyanya nezve maitiro ekutenga. Iko kutsvagurudza kwakawanda kwakazadzikiswa nehurukuro dzeboka dzakatarisana nevatengi vanobva munyika yega yega, yakaitiswa zvakaringana. Ongororo - pamwe nehurukuro dzeboka rinotarisa - yaive nemusanganiswa une hutano wehuwandu hwevanhu uye mushandisi / asiri-mushandisi persona.
Vabatsiri vezwi vanozoshandura zvachose mabhuroka nevatengi vanobatana. Chinoita kuti vabatsiri vezwi vanakidze ndechekuti dzakarukwa muhupenyu hwehupenyu hwedu, zvichipa kureruka uye hupfumi hwekudyidzana izvo vatengi vasati vamboona. Mhando dzinokwanisa kushandisa pane hombe vatengi chishuwo chakakomberedza izwi revabatsiri hazvingogadziri chete kuvaka hukama hwepedyo nevatengi vavo, asi kugadzira mikana yakakura yekukura yavo. Maka Taylor, Chief Experience Officer, Dhijitari Yevatengi Zvakaitika tsika, kuCapgemini
Izvo Zviwanikwa zveiyo Consumer Ongororo paIzwi Commerce:
Vabatsiri vezwi vanozochinja ecommerce - Vatengi vari kuvandudza yakasimba sarudzo yekudyidzana nemakambani kuburikidza nezwi vabatsiri. Vabatsiri vezwi vashandisi parizvino vari kushandisa 3% yemutengo wavo wese wevatengi kuburikidza nevabatsiri vezwi, asi izvi zvinotarisirwa kuwedzera kusvika ku18% mumakore matatu anotevera, zvichideredza mugove wezvitoro zvepanyama (45%) nemawebhusaiti (37%). Ipo ichitenderera mimhanzi uye ichitsvaga ruzivo inoramba iri inonyanya kufarirwa mashandisirwo evanobatsira izwi nhasi, vanopfuura chetatu chevakabvunzwa (35%) vakavashandisawo kutenga zvigadzirwa zvakaita sekutenga, kuchengetwa kumba, uye mbatya.
Vatengi vanogutsikana zvakanyanya nezwi remubatsiri wezwi - Vatengi vanoshandisa vabatsiri vezwi vane chokwadi kwazvo nezve ruzivo rwavo, ne71% vachigutsikana nemubatsiri wezwi ravo. Kunyanya, 52% yevatengi vanotaura zviri nyore, kugona kuita zvinhu nemaoko-emahara (48%), uye otomatiki ezvekujairika zvekutenga mabasa (41%) sezvikonzero zvikuru nei vachida kushandisa vabatsiri vezwi pamusoro pemapurogiramu efoni nemawebhusaiti. Iko kugona kwemubatsiri wezwi kuti vanzwisise mushandisi wavo wevanhu kwakakoshawo; 81% yevashandisi vanoda ivo mubatsiri wezwi kuti vanzwisise diction ravo uye madudziro.
Vabatsiri vezwi vanounza mabhenefiti ekongiri kune vatengesi uye zvigadzirwa - Mhando dzinopa zviitiko zvakanaka zvemubatsiri wezwi zvinounza bhizinesi rakawanda uye kutaura kwakanaka-kwekutaura-kwemuromo. Chirevo chakawana kuti 37% yevashandisi vezwi vanoshandisa vanogona kugovana chiitiko chakanaka neshamwari uye mhuri, uye kunyangwe 28% yeavo vasiri-vashandisi vangave vachida kuchinjisa kakawanda neiyo mhando zvichitevera chiitiko chakanaka. Izvi zvinokwana kuita kwakakomba mukana wezvemari, sevatengi vari kuda kushandisa 5% yakawanda nechiratidzo zvichitevera chiitiko chakanaka nemubatsiri wezwi.
Zvakawanikwa naCapgemini ndezvekuti masangano ezvokutengeserana anoda kuvaka hurongwa hwekuita nekukurumidza kuronga izwi rinotungamirwa Kukurukurirana Commerce sarudzo.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa zvikwata zvangu zvakabatana mune ino posvo!
Tags: amazon alexaamazon echoamazon showanypodapple homepodcapgemininhauriranogoogle homePodcast hunyanzvivaSiriyaizwikutengeserana kwezwiizwi kutsvaga
Iwe Ucharasa Kushambadzira Kwako Jobho kune Robhoti?